KYAW CHAN NYEIN: လွှမ်းမိုးမှု မပါ တဲ့ စကားလုံး ဟာ အေးချမ်းပါတယ်.
လွှမ်းမိုးမှု မပါ တဲ့ စကားလုံး ဟာ အေးချမ်းပါတယ်.
ရုပ်သတ္တ၀ါအနေ နှင့် အားကိုးလိုလျှင် မိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာဧ။် ..
စိတ်ဓါတ်အားနည်း နေ လို့အားကိုးချင်လျှင် ဓမ္မတရား ကို သာကိုးကွယ်ရာဧ။်..
ကဲ့ရဲ့ တို်င်းလည်း ၀မ်းမနည်းနှင့်၊
၁။ရတဲ့အတိုင်း ရောင့်ရဲတင်းတိမ်ခြင်း( ရှိတာလေး အတိုင်း ကိုလက်ခံ.ရောင့်ရဲခြင်း)
၂။မိမိစွမ်းနိုင်သမျှ နှင့် ရောင့်ရဲတင်းတိမ်ခြင်း(မပြုလုပ်နိုင်ပေမဲ့ ပြုလုပ်နိုင်သလောက်ဖြင့် ရောင့်ရဲနိုင်ခြင်း)
၃။မိမိနှင့်သင့်လျောက်သလောက် နှင့် ရောင့်ရဲတင်းတိမ်ခြင်း(ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း.မပြုလုပ်သင့်သောကြောင့် ဆင်ခြင်၍ ရေ...
ချီးမွမ်းခြင်း နှင့် မြှောက်ပင့်ခြင်း
လူတယောက် ကို အမှန်တကယ်စေတနာ နှင့် ပြုပြင်လို
လျှင် .. အပြစ်ဆို ၊ပုတ်ချပြီး ပြောဆိုခြင်းထက်၊အမှား ကို သေချာစွာရှင်း
ပြပြီး အမှန် ကိုပြောပြ ၍ မေတ္တာထား လျှင်..နားထောင်သူနှင့် ဆိုဆုံးမ သူ
နှစ်ဦး လုံးအတွက် ပို၍အကျိုးဖြစ်စေပြီး မင်္ဂလာရှိစေ ပါသည်။
‎"သတိရှိမှ၊ အသိရှိမယ်၊ အသိရှိမှ၊ စိတ်အားရှိမယ်၊ "
စိတ် အားရှိ ရင် ဆုံးဖြတ်သင့် တာ ကို မှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ် နိုင်မယ်။
‎"မရှိတာထက်၊မသိတာခက်"တဲ့ "မသိတာထက်၊မသိချင်တာ" က ပိုဆိုးပါတယ်။"မသိချင်တာထက်၊ သိချင်ယောင်ဆောင်တာ" က ပို၍ပင်ခက်ပါတယ်တဲ့။
‎"တရား"ကို ကျောပေးနေ၍ "အိပ်၊စား၊ကာမတဏှာ"
ကိုသာကျက်စားရုန်းကန်နေသောသောလူသတ္တ၀ါတို့ သည် အထက်ကောင်းကင် ကို
လေးဖက်ထောက်၍ကျောပေးနေသောသတ္တ၀ါတွေ နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပေသည။်
၀န်ခံဖို့ တောင် ခက်နေ ရင် ပြုပြင်ဖို
့တော့ဝေးနေပါသေးသည်။ကောင်းမွန်သော လုပ်ရပ် ကို မ ချီးကျူး
နိုင်သေးလျှင် ပြုလုပ် ဖို့ ဆိုတာ ဝေးနေပါသေးသည်။
Posted by KYAW CHAN NYEIN at 10:46 AM